PEOPLE should seriously consider to NATIONALIZE U PAING | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သဲချောင်း မွတ်စလင် ဒုက္ခသည် စခန်းကို အဓမ္မ ဖိအားရွှေခိုင်းရာ လက်မခံသဖြင့် ရဲများ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်
U Gambira transferred to Insein Prison, Facing up to 30 Years »
PEOPLE should seriously consider to NATIONALIZE U PAING
DASSK and PEOPLE should seriously consider to NATIONALIZE U PAING as their wealth is part of the LOOT they robbed from our country.
မြန်မာပြည်တွင် ၂၀၀၈ အခြေခံဖွဲ့ စည်းပုံကို–အလိုမရှိ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်မြဲနေသမျှကာလပတ်လုံး ယခုကဲ့သို့
“တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နှင့်အညီ (ဗိုလ်) ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုများ” ကို ပြည်သူအများ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တည်ဆဲအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းပြီးအကြမ်းဖက်သလို အခြေခံဥပဒေ စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲ အဓမ္မအတည်ပြုပြီးလည်း အကြမ်း ဖက်တာပါပဲ။အခြေခံဥပဒေမရှိဘဲ အကြမ်းဖက်သလို အခြေခံဥပဒေရှိပြန်တော့လည်းအကြမ်းဖက်တာပါပဲ။ဒီလိုအကြမ်းဖက်တဲ့ ဓလေ့စရိုက်ဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇသဘာဝဖြစ်တယ်။လက်ပန်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရေး ဆန္ဒပြသူတွေကို အစိုးရ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေက အင်အားသုံး အကြမ်း ဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့စရိုက်ဟာလဲစစ်အုပ်စုရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇသဘာဝဖြစ်တယ်။တိုက်ရိုက်ပြည်ထောင်စု (ဖယ်ဒရယ်) လွှတ်တော် နဲ့ အစုိုးရ မကျင့်သုံးတာတဲ့
၂၀၀၈ အခြေခံဖွဲ့ စည်းပုံတိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မကျင့်သုံးတာတဲ့-၂၀၀၈ အခြေခံဖွဲ့ စည်းပုံမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ၂၅% ကိုယ်စားပြုဒီမုိုကရေစီစနစ်အပြင်လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ပြီး စစ်ကျွန်ဘဝပြန်ရောက်အောင် အသက်သွင်းနေတဲ့-၂၀၀၈ အခြေခံဖွဲ့ စည်းပုံ
၂၀၀၈ အခြေခံဖွဲ့ စည်းပုံကို တို့ လူထုအတွက် အကျိုးမပြုလို့ 
လူထုကမကြိုက်တဲ့-၂၀၀၈ အခြေခံဖွဲ့ စည်းပုံ
လူထုက လည်း လမ်းပေါ်ကနေ မကြိုက်ဘူးပြောနေကြတဲ့-
၂၀၀၈ အခြေခံဖွဲ့ စည်းပုံ
By မင်းမောင် ( ဆာမူရိုင်း ) Source FB of Sa Maung
This entry was posted on December 3, 2012 at 4:08 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.